Guam weputara Mobile Access na Nkwuputa Elektrọnik
Home » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ Guam » Guam weputara Mobile Access na Nkwuputa Elektrọnik
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Editorial • Akụkọ Ọchịchị • Akụkọ Guam • News • ndị mmadụ • Technology • Tourism • Okwu Nlegharị Anya • Transportation • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Akụkọ dị iche iche
Guam bụ US ụgbọ elu 7 awa ụgbọ elu si Hawaii ma nwee iwu ọdịnala nke ya.
Taa Guam kwupụtara na ọ bụ ebe mbụ ụwa ga-emejuputa teknụzụ elektrọnik maka nkwupụta omenala.
Guam Visitors Bureau (GVB), yana mmekorita ya na Guam Customs and Quarantine Agency (CQA), na Guam International Airport Authority (GIAA) weputara webụsaịtị maka Guam Electronic Declaration Form (EDF).
Nke a bụ usoro nke abụọ na nke ikpeazụ nke mmejuputa EDF, nke ewepụtara na mbido Machị 2021. Akụkụ nke mbụ nke mmemme a nwere ndị njem nọ n'ụgbọ elu ndị ọzọ mejupụtara EDF site na kiosks a họpụtara na mpaghara ebe ana-ebu ibu na ọdụ ụgbọ elu.
Guam bụ otu n’ime ebe izizi ụwa iji tinye ụdị teknụzụ a.
“Guam bụ otu n’ime ebe izizi ụwa iji tinye ụdị teknụzụ a. Mba ole na ole, dị ka Bali, na-enye ụdị njem dijitalụ a dị mma ugbu a. Anyị chọrọ ikele Gọvanọ Lou Leon Guerrero maka nkwado ya na-aga n'ihu. O nyere akụrụngwa iji melite ụdị nkwupụta omenala anyị wee chụpụ mgbanwe nke ụlọ ọrụ ndị njem anyị na ọrịa a, "GVB President na CEO Carl TC Gutierrez kwuru. "Si Yu'os Ma'åse 'nye Ike Peredo na CQA, yana John Quinata na GIAA maka mbọ ha na-agba iji nyere aka mee ka agwaetiti anyị na-agba ọsọ nke ọma."
"Mgbe ọnwa nke ime atụmatụ na ule gasịrị, anyị nwere obi ụtọ ịga n'ihu na ntinye ọrụ nke njikọ mkpanaka maka EDF," ka Ike Q. Peredo, Director nke CQA kwuru.
Site na mbido ekwentị, ndị njem niile na-aga Guam ga-enwe ike mejupụta EDF na kọmputa ha ma ọ bụ ngwaọrụ mkpanaka ha ruo elekere 72 tupu ha abata na Guam.
“Ihe nke a pụtakwara maka Tan Maria ma ọ bụ Tun Jose bụ na teknụzụ a na - eme ka ọ dịrị ndị ezinụlọ ha mfe iji nyere ha aka dejupụta fọm tupu oge eruo. Ha ekwesịghị ichegbu onwe ha banyere idejupụta ya mgbe ha nọ n’ụgbọelu, ”ka Gutierrez kwuru.
Njikọ mkpanaka ahụ na-egosipụta akara ikpeazụ nke EDF wepụtara nke ga-enyere ụwa aka ịnweta ụdị nkwupụta iwu Guam. GVB na-agba ndị njem niile ume ka ha jiri ohere windo ụbọchị atọ tupu ịbanye maka usoro ntinye na-enweghị mmetụ na CQA.
Nico Fujikawa, GVB Director of Research Tourism Research kwuru, sị: "Na mbụ anyị mere atụmatụ maka njikwa a na-achịkwa nke EDF iji hụ na iguzosi ike n'ezi ihe nke usoro ahụ na ichedo ozi ndị njem na usoro ahụ niile." "EDF bụ ihe ngwọta na-enweghị ntụpọ nke Guam ga-enye ndị njem niile na ndị ọbịa niile ka anyị na-aga n'ihu."
Enwere ike ịnweta EDF na ntanetị n'ịntanetị cqa.guam.gov ma ọ bụ guamedf.landing.cards. Ezigbo ụlọ ahịa EDF a họpụtara ahọpụta n'ime mpaghara ebe a na-ebu ibu nke ọdụ ụgbọ elu Guam ga-enwekwa ike ịnweta.